Ciiddamo Ethiopian iyo kuwo loo tababaray Galmudug oo ku wajahan Gal-cad iyo Ceel-dheer. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ciiddamo Ethiopian iyo kuwo loo tababaray Galmudug oo ku wajahan Gal-cad iyo Ceel-dheer.
Wararka aynu ka helayno magaalladda Ceel-buur ayaa waxay sheegayaan inay halkaasi ka ruqaansadeen Ciiddamo Ethiopian iyo kuwo Soomaali ah, kuwaasi oo qorsheynaya inay Alshabaab ka saaraan Deegaanadda ay kaga sugan yihiin Bariga Deexda Galgaduud, gaar ahaan Degmooyinka Gal-cad iyo Ceel-dheer.
Ciiddanka Ethiopianka waxaa la socda Ciiddan Deegaanka oo ay tababareen, kuwaasi oo ku wehlin doona Hawlgalka Alshabaab looga saarayo Labadaasi Degmo.
Sidoo kale, Xeebta Degmadda Cadale ee Gobalka Sh/dhexe waxaa ka socda Dhaqdhaqaaq Ciiddan oo ay wadaan Ciiddanka Dowladda iyo kuwa AMISOM, kuwaasi oo la sheegay inay qeyb ka yihiin Hawlgalka Alshabaab looga saarayo Degmooyinka Ceel-dheer iyo Gal-cad.
Dhinaca kale, Kolonel Maxamuud Koronto oo ahaan jirey Taliyihii Guutadda Koowaad ee Ciiddanka Xoogga Dalka Somalia ee Gobalka Sh/dhexe ayaa ku eedeeyey Madaxtooyadda iyo Wasaaradda Gaashaandhigga inay dayaceen dagaalka lagula jiro Alshabaabka ku sugan qeybo ka mid ah Sh/dhexe ilaa Deexda Bari ee Gobalka Galgaduud.
Sarkaalka oo dhawaan la hadlay Radio Dalsan waxa uu tilmaamay in la dayacay in lala dagaalamo Alshabaab ku sugan qeybo ka mid ah Sh/dhexe ilaa Bariga Galgaduud, iyadoo Ciiddankii u dhashay Deegaanadaasi loo jiheeyo dagaallo ka socda Deegaano kale.
DEGDEG: Guddoomiyihii Suuqa Khudaarta ee Siinaay oo la dilay.
(SAWIR) Egypt Air: “Wada-xaajood ayaa lagula jiraa Afduubaha…”